युगसम्बाद साप्ताहिक - ट्रम्पको कारण आएको सङक्रमणकाल
Friday, 11.16.2018, 02:12am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 01.31.2017, 11:19am (GMT+5.5)
एलिजावेथ ड्रिउ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आँफ “राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिकी राजनीतिमा देखिएको आश्चर्यजनक र सनसनीपूर्ण सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन लागेको छ । यो समयले आगामी दिनमा ट्रम्पसँगको जीवन कति अकल्पनीय हुनेछ भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ .
राष्ट्रपति निर्वाचनपछिको सङ्क्रमणकाललाई ट्रम्पले आफ्नो पदाधिकारी छनौट र आगामी दिनमा अमेरिकाले कस्ता प्रकृतिका विषयमा झन्झट व्यहोर्न पर्नेछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्न प्रयोग गर्नुभयो तर आपूmले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेपछि अवलम्वन गर्ने नीतिका बारेमा खासै महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छैन । यद्यपि मौखिकरुपमा उहाँका विचारहरू भने राख्दै आउनुभएको छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले आफ्नै खालको पृथक विदेश नीतिको व्यवस्था गर्ने धुनमा हुनुहुन्छ ।
अमेरिकी राजनीतिक अभियानबाट प्राप्त उहाँको उपलब्धि अर्थात् राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको केही हप्तामै ट्रम्पले ट्वीट गर्दै बेलायतलाई यूरोपियन यूनियन (इयू)बाट बहिर्गमनका लागि सफलतापूर्ण अभियान चलाएका निगेल फ्यारेजलाई अमेरिकाका लागि बेलायती राजदूत बनाउन बेलायत सरकारलाई सल्लाह दिनुभयो ।
त्यसको लगत्तै ट्रम्पले ताइवानी राष्ट्रपति साई यिङ वेङलाई यसअघि अमेरिकी प्रशासनले स्वीकार्दै आएको एक चीन नीति हुनेगरी ताइवानी राष्ट्रपतिसँगको सम्वाद आयो । एक चीन नीतिलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको दल रिपब्लिकन पार्टी र यहाँको डिमोक्रेटिक पार्टी समेतले करिव ४० वर्षदेखि समर्थन जनाउँदै आएका छन् । चीनले ट्रम्पको अभिब्यक्तिको कडा रुपमा आलोचना ग¥यो जसका कारण ट्रम्पले अर्को एक सन्देश लेख्दैे एक चीन नीतिप्रति आपूm प्रतिवद्ध रहेको जनाउनुभयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यस पहिले नै आपूm इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहरूको पक्षमा उभिने उभिने सङ्केत गरिसक्नुभएको छ । बेन्जामिन तथा इजरायली सरकार प्यालेष्टिनीद्वारा आफ्नो दावी गर्दै आएको उक्त भूमिमा वस्ती बिस्तार गर्ने पक्षमा रहनु स्वभाभिक भएपनि विवाद समाधान नगरी बस्ती बसाउन गरेको प्रयासको अन्तरराष्ट्रिय समुदायले रुचाएको छैन ।
इजरायलका लागि आफ्नो दूतमा विदेश नीतिको अनुभव नभएका तर बस्ती बिस्तारका पक्षधर बकीललाई नियुक्त गरियो । योभन्दा अझै अचम्मको कुरा राष्ट्रपति ट्रम्पको भ्लादिमिर पुटिनप्रतिको आकर्षण सङ्क्रमणकालको अनौठौँ प्रसङ्ग बन्नपुग्यो । राष्ट्रपति ट्रम्प र पुटिनबीच शनिबार फोनबार्ता हुने कार्यक्रम छ ।
यही जनवरी १०मा एउटा यस्तो समाचार बाहिर आयो जसले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पनि झस्काएको हुनुपर्छ । अमेरिकी गुप्तचर निकायले तत्कालिन राष्ट्रपति ओवामा र राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ट्रम्पका क्रियाकलाप र नीजि जीवनका बारेमा अपुष्ट आरोपहरू सार्वजनिक गरिदियो । भलै यी आरोपका विषयमा शङ्काउपशङ्का उत्तपन्न भएका छन् । यो पक्का छ कि पुटिन र रसियासँगको ट्रम्प र अमेरिकी सम्वन्धमा त्यति सजिलै अनि छिट्टै सहजता आउने देखिन्न । ट्रम्पका पुटिनसम्वन्धी धारणा अमेरिकी समाजका लागि चिन्तायुक्त सन्दर्भ बन्नसक्छन् । कुरा यो छ कि के ट्रम्पले पुटिनलाई यूक्रेन हस्तक्षेपमा सघाउने कुरामा सल्लाह दिन सक्छन् ।
आफ्नो चुनावी अभियानका समयमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो)का बारेमा नेटोको अवमूल्यनहरूने गरी आएका कुराले ट्रम्पसँग चिढिएको नेटोसँगको सम्वन्धमा पुनःविचार नगर्ने हो भने ट्रम्पले रसियाली नेता वा प्रशासन वाल्टिक क्षेत्रमा आक्रामक हुँदा कसरी मुकावला गर्नुहुनेछ यो प्रश्न उब्जिएको छ । नेटो सहयोगी राष्ट्रपति चुनावी अभियान र त्यसपछि पनि दिएका उत्तेजनात्मक एवम् चेतावनीमूलक अभिव्यक्तिले कतै पुटिनले ट्रम्पलाई खेलाएका त छैनन् शङ्का उब्जाएको छ ।
राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पको बलियो प्रतिद्वन्दी मानिएकी डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बन्नुभएकी हिलारी क्लिन्टन र उहाँको चुनावी अभियानका प्रमुखलगायतका सम्वन्धमा विकिलिक्समार्फत् चुहिएका इमेलका कारण ट्रम्प आपूm विजय भएको विश्वासमा पुटिनप्रति कृतज्ञ देखिनुभएको त होइन । अन्यथा गत अक्टोबरमा विभिन्न अमेरिकी गुप्तचर संस्थाहरूले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी निर्वाचनमा रसियाको हस्तक्षेप पाइएको भन्ने विषयप्रति ट्रम्प गम्भीर किन नहुने ?
अमेरिकी कँग्रेसमा प्रतिनिधित्व गरेका रिपब्लिकन पार्टी वा डेमोक्रेटिक पार्टीका कैयौँ सदस्यहरूले ट्रम्पले गुप्तचर निकायबाट प्राप्त सूचनाको वेवास्ता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा कटिवद्ध सरकारी कर्मचारी जसलाई उच्च जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा लगाइन्छ उनीहरू कै अविश्वास गर्नु ट्रम्पकै लागि घातक हुनसक्ने बताएका छन् । यसबाहेक उनीहरूको प्रयोग गरेर रणनैतिक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हँुदा ट्रम्पले गुप्तचर रिपोर्टलाई विश्वास गर्नु विवेकपूर्ण ठहरिने छ ।
ट्रम्पले निर्वाचनको नतिजामा रसियाको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै आएनुभएको छ । अमेरिकी गुप्तचर निकायले पनि रसियाले सन् २०१६ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा अकल्पनीय रुपमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्ने पहल गरेको भेटिँदैन । सबै समय विषयमा ट्वीट गरी आफ्नो विचार राख्ने बानीले कतिपय अवस्थामा समस्या पार्नसक्छ ।